China Responds Slowly, andaPig Disease BecomesaLethal Epidemic | Myanmar Business Today
Home Business International China Responds Slowly, andaPig Disease BecomesaLethal Epidemic
“Three years of costs were all for nothing,” Peng said.
His loss was the government’s as well. Because he did not report the episode, local officials could not make sure he followed all the steps necessary to halt the spread, like burying carcassesaconsiderable distance from the farm. Peng said he probably buried them too close to his farm but declined to discuss details of the disposal.
Chinese officials have tried to be reassuring. In April, July and October, officials said they had brought the disease under control, only to see signs of further spread. Each new statement was provided byaless senior official than the one before. Most recently, the agriculture ministry said that it only hoped production at the end of next year would be four-fifths of normal levels — stillashortfall equal to the entire pork production of the United States, the worl’s second-largest pork-producing nation.
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပျံ့နှံ့လာသော အသေအပျောက်များသည့် ရောဂါသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မွေးမြူထာသည့် ဝက်အကောင်ရေစုစုပေါင်း လေးပုံတစ်ပုံကို သေကျေပျက်စီးစေခဲ့ကာ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ပုံစံပြောင်းစေခဲ့သကဲ့သို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ စားသုံးသူများ၏ အစားအသောက်များကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဆိုပါ ရောဂါကို အောင်မြင်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သောကြောင့် ရောဂါပျံ့နှံ့မှု ပိုများလာခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဒုက္ခရောက်စေမည့် ပြဿနာများပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
အာဖရိကဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တားဆီးရန်ဆိုလျှင် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်သည့် ဝက်များကို သုတ်သင်ကာ စနစ်တကျဖျက်ဆီးပစ်ရန် ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို နားချရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အာဏာပိုင်များမှာ ဘဏ္ဍာရေးအင်အား သိပ်မ‌တောင့်တင်းသော ဒေသအစိုးရများထံမှာ လျော်ကြေးငွေရယူလိုသည့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များကြောင့် လုပ်ရကိုင်ရ လက်မသာဖြစ်နေသည်။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်များမှာ Peng Weita ကဲ့သို့သော လယ်သမားများဆီသို့ ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ‌ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခင် သုံးလအလိုက သူ့ဝက်တစ်ကောင် သေသွားသည့်အခါတွင် Peng Weita သည် အခြားသော ဝက်အကောင်လေးဆယ်လောက်ကို သုတ်သင်ကာ မြေမြှုပ်လိုက်သည်။ ‌လျော်ကြေးငွေရရှိရန်အတွက် ဒေသအစိုးရကိုလည်း သတင်းပို့ခြင်းမရှိပေ။
“သုံးနှစ်စာ အရှုံးဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု Peng က ပြောသည်။
သူ၏ ဆုံးရှုံးမှုမှာ အစိုးရ၏ အရှုံးပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော သူမွေးထားသည့် ဝက်များ ရောဂါဖြစ်သည်ကို အစိုးရထံ သတင်းမပို့မိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသအစိုးရအနေဖြင့် ဝက်အသေကောင်များကို မွေးမြူရေးခြံနှင့် ဝေးကွာသောနေရာတွင် မြှုပ်နှံခြင်းကဲ့သို့သော ရောဂါကူးစက်မှု တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစဥ်များကို အတိအကျ လိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ‌ခဲ့ပေ။ Peng က ၎င်းအနေဖြင့် ဝက်အသေကောင်များကို ဝက်ခြံနှင့် ခပ်နီးနီးတွင် မြှုပ်မိခဲ့နိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတော့ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ရောဂါကူးစက်မှုမှာ ပြဿနာတော်တော်များများကို အ‌စိုးရက ဦးဆောင်ကာ အပေါ်မှအောက် ဖြေရှင်းသည့် တရုတ်အစိုးရအသည်းခိုက်သည့် နည်းလမ်း၏ အကန့်အသတ်ကို ပြသနေသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် လူပေါင်း ၁ဒသမ၄ ဘီလီယံကို ကျွေးမွေးနေရသည့် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်စွာ ရရှိရေးကို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတစ်ရပ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်။ ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြည်တွင်း ဝက်သားလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီသည်အထိ မွေးမြူလာနိုင်ခဲ့သည်။ ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါကပ်ဘေးသည် ထမင်းဝိုင်းတွင် အသားဖြင့် စားလိုသော ကုံလုံလာသည့် ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုသည့် တရုတ်အစိုးရ၏ စိတ်ဆန္ဒကို စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
လူသားများကို မကူးစက်နိုင်သော်လည်း လူသားတို့ကြောင့် အလျင်အမြန် ကူးစက်နိုင်သည့် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါသည် ယခုအခါတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြင်ဘက်အထိ အလျင်အမြန်ကူးစက်လာခဲ့သည်။ အာရှနိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံလာသည်။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဝက်သား ထုတ်လုပ်မှု ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု များနေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ မရောက်မီတွင် အဆိုပါရောဂါမှာ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံအချို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပွားနေသည်။
SOURCEKeith Bradsher and Ailin Tang (New York Times)
Previous articleU.S. Gains From China Deal Come ataCost
Next articleAustralian Dollar Awaits Job Data, Kiwi at 1-week Low as Dairy Prices Fall